Mouse Ce Asambodo, Asambodo Batrị, Ule Batrị - Anbotek
Ọrụ mpaghara: E jiri ya tụnyere nnukwu ụlọ ọrụ dịka TUV, SGS na Intertek, ọnụahịa anyị bụ naanị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ha, yana obere oge ndu. Free retest ọrụ dị. Ikwesiri iziga ihe nlele naanị otu oge, ule na asambodo niile nwere ike mechaa na ụlọ nyocha nke anyị na Shenzhen, China.
Nkwenye nke Ogo: Ọ bụrụ na Anbotek nwere ohere ịhọpụta gị dị ka ụlọ nyocha gị na China, nyocha ahụ sitere na ụlọ nyocha anyị maka onye na-eweta ngwaahịa gị nke China, ma ọ gafere ma ọ bụ daa, anyị ga-agwa gị eziokwu na oge mbụ iji gbochie akụkọ ụgha na ndị na - nkwekọ ngwaahịa.
Beingbụ onye ọrụ bara uru bara uru ka ị bụrụ onye gị na ya gbakọtara ọnụ, anyị nwere ike ịnye ọrụ ndị a na - akwụghị ụgwọ a) ị ga - akwụ ụgwọ ọrụ otu na otu iji dozie nsogbu niile nyocha na asambodo zutere na ahịa ụwa nke ngwaahịa gị. b) ndá »‹ á »rá» service ase ozi nke akuko na asambodo. c) nkwanye nke ndị na-eweta ngwaahịa dị elu. Anyị nwere nchekwa data nke ndị na - eweta ngwaahịa ruru eru nke 50,000 (ndị nrụpụta) na China,
OA Akara Asambodo CE Anyị nwere ike ịnwale ma kwadebe, hazie akụkọ ule zuru oke, impeccable na enweghị mgbagha dabere na European LVD, EMC, ROHS, RED, MD Directive and Regulations. Ogo na oge ndu nke ule na asambodo ga-eju gị anya na karịa ọnụahịa anyị na-enye.
AKW OKWỌ AKW .KWỌ
Anbotek nwere ụlọ ọrụ EMC na-eduzi ụwa, gụnyere: usoro 3 mita abụọ zuru oke ụlọ mgbochi (oge nyocha ruo 40GHz), ụlọ nchebe anọ, otu ụlọ nyocha electrostatic (ESD), yana otu ụlọ nyocha nnyonye anya mgbochi. arụpụtara ma wuru ya site na Germany ROHDE & SEHWARZ, SCHWARZBeck, Switzerland EMC Partner, America AGILENT, TESEQ na ụlọ ọrụ mba ndị ọzọ kachasị elu na ụlọ ọrụ ahụ. ỌZỌ
Frequencylọ nyocha redio ugboro ugboro
RF Lab nwere ọtụtụ ndị ọkachamara na teknụzụ nkwukọrịta wireless na-ekpuchi China SRRC, EU RED, United States FCC ID, Canada IC, Japan TELEC, Korea KC, Malaysia SIRIM, Australia RCM wireless asambodo ngwaahịa na ihe karịrị mba 40. na mpaghara. ỌZỌ
Ọdụ nyocha nchekwa eletriki
Nchekwa nchekwa nchekwa bụ otu n'ime ụlọ nyocha mbụ emere na Anbotek Testing, na-eje ozi maka nchekwa nchekwa na asambodo nke ihe dị iche iche nke azụmaahịa na ngwaahịa eletriki na eletriki. Site na ngwa nnwale dị elu, ahụmịhe bara ụba na ọrụ nchekwa yana ihe karịrị ndị ọrụ injinia ọkachamara 20, Anbotek Testing Institution nwere ike mezuo ihe ndị ahịa chọrọ maka ule na asambodo. ỌZỌ
New ike batrị laabu
Iji kwado nkwado na mgbanwe nke ụlọ ọrụ batrị, Anbotek Testing emeela ka itinye ego na batrị nchekwa batrị na ụlọ nyocha batrị dị ike n'afọ ndị na-adịbeghị anya, meziwanye ngwa ọrụ na akụrụngwa batrị dị iche iche, wee webata ndị injinia batrị na ndị ọkachamara. ỌZỌ
Ndị na-eri nri na ụlọ ahịa na ngwa ahịa ndị ahịa
Anyị nwere ọtụtụ afọ nke ọkachamara oru nnyocha na ule ahụmahụ na ubi nke nri kọntaktị ihe. Uzo ndi CNAS na CMA choputara na-ekpuchi ihe nchebe nke nchekwa nke ihe ndi choro nri na uwa dum. Laboratorylọ nyocha ngwa ahịa ndị ahịa bụ ọkachamara nwere ngwa elektrọnik, ụgbọala, ihe ụmụaka ji egwuri egwu, textiles na ngwaahịa ndị ahịa ndị ọzọ, nyocha arụmọrụ na mmelite nke ọrụ. ụlọ ọrụ. ỌZỌ
Elilọ nyocha a pụrụ ịdabere na ya
Anbotek Ulo oru nyocha ulo oru ntukwasi obi bu ulo oru oru oru aka nke oma na nyocha nke ngwa elektrọnik na eletriki. Lekwasi anya na oru ihe na ntukwasi obi nyocha ma nyere ndi ahia aka imezi ihe ha. ỌZỌ
Labolọ nyocha Ọgwụ Na-arụ Ọrụ na Ihe Ndị Na-arụ Ọrụ
Laboratory Automotive & Components Laboratory bụ ụlọ nyocha nke atọ ndị ọkachamara na-anwale ngwaahịa akpụrụngwa. Ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ enwetara asambodo CNAS, CMA na CCC nke akụrụngwa ime ụlọ. Anyị nwere ike ịnye gị ọrụ ọkachamara na ogo dị elu na-akwụsị na ubi nke ihe onwunwe na-anwale nke ime / ihe ịchọ mma dị n'ime, mpụga VOC nke ihe na akụkụ, nyocha ngwa ngwa akpaaka, wdg. ỌZỌ
Ọgụgụ isi ọkụ arụmọrụ arụmọrụ & laabu arụmọrụ arụmọrụ
Anyị nwere ihe karịrị afọ 10 nke ahụmịhe ọrụ asambodo mba ụwa na asambodo ike ọkụ ọkụ. Anyị ike ọma ekwenye mmekọahụ na ọtụtụ ahịa na-akwakọba ọtụtụ iri puku nke ọma asambodo ikpe. N'otu oge ahụ, ya na UL, BV, ETL, EPA, DLC, TUV SUD, TUV Rheinland na ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị na Germany nwere mmekọrịta chiri anya, ma nwee uru pụtara ìhè na ntanetị aka. ỌZỌ
Ọrụ mbufe mba ụwa
Ntugharị mba na otu Belt And One Road asambodo Anbotek etinyela aka na asambodo mba ụwa kemgbe ihe karịrị afọ 10, wee nwee ahụmịhe bara ụba na CCC, SABER (nke bụbu SASO), SONCAP, TUV MARK, CB, GS, UL, ETL, SAA na mpaghara asambodo ndi ozo. ỌZỌ
Laboratorylọ nyocha fotovoltaic
Dị ka onye na-enye ndị na-eweta modul fotovoltaic na akụrụngwa nnwale na asambodo dị na China, Anbotek Testing Co., Ltd. nwere ngwa ngwa nyocha nke mba ụwa ma nye ya ikike ma kwenye site na CNAS, CBTL, TUV, wdg, na-enye nchekwa na ọrụ dị mkpa. maka ụlọ ọrụ fotovoltaic zuru ụwa ọnụ. ỌZỌ
Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited (Abbreviated as Anbotek, Stock code 837435) bụ ihe zuru oke, nke onwe ya, nke nwere ikike nnwale nke ndị ọzọ nwere ụgbụ ọrụ na mba niile. Otu ngwaahịa ndị ọrụ gụnyere Internet nke Ihe, 5G / 4G / 3G ngwaahịa nkwukọrịta, ụgbọ ala mara mma na akụrụngwa ha, ike ọhụrụ, ihe ọhụrụ, ụgbọelu, ụgbọ okporo ígwè, nchekwa mba na ụlọ ọrụ ndị agha, ọgụgụ isi, gburugburu ebe obibi na wdg.
Ndị ọkachamara na ọrụ nnwale siri ike ỌZỌ
Izipu nyocha nyocha, anaghị ele mmadụ anya n'ihu ỌZỌ
Professional ngwọta dozie ngwaahịa asambodo mgbasa nsogbu, nke mere na ụwa ịkọrọ àgwà ngwaahịa ỌZỌ
Ọrụ na-akwụ ụgwọ
Ọrụ ndị dị elu iji nye ọzụzụ zuru ụwa ọnụ, njikwa, ọrụ nyocha kachasị elu maka afọ ojuju gị, iji kwado uru m bara. ỌZỌ